मिडियाको साथ मात्र खोज्ने कि आफूलाई पनि ब्रान्डिङ गर्ने ? – An Online Entertainment News Portal
HomeEventमिडियाको साथ मात्र खोज्ने कि आफूलाई पनि ब्रान्डिङ गर्ने ?
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- मिस वल्र्डमा सहभागी हुनका लागि चीनमा रहँदा मिस नेपाल वल्र्ड श्रृङ्खला खतिवडालाई कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ बर्षिया बालिका निर्मला पन्तसँग तुलना गरेर हेरिएको थियो । मिस वल्र्ड नेपालले संभवत पहिलो पटक मिस वल्र्डमा भाग लिदा यो खालको उचाई पाएको थियो । यसको पछि श्रृङ्खलाको प्रतिभा पनि एक ठाउँमा होला, अर्कोतिर आम जनताले उनलाई गरेको समर्थन पनि हो । कुनै न कुनै रुपमा उनी नेकपाकी नेताकी छोरी हुनुको फाइदा पनि यसमा मिसिएको थियो ।
मिस वल्र्डको उत्कृष्ट १० मा यसअघि इशानी श्रेष्ठ पनि पुगेकी थिइन् । तर, उनले यो खालको हाइप पाएको देखिएन ।
मिस वल्र्डमा सहभागी हुने नेपाली मिस नेपालको हाइप अन्य विधाको भन्दा बढी हुन्छ । किनकी, मिस नेपालको आयोजकले नै यसलाई सबैभन्दा माथिल्लो स्थानमा राखेको पाइन्छ । पहिलो स्थानमा रहेको विधाले उच्चतम स्थान पाउनु कुनै नौलो कुरा पनि भएन ।
यो गुनासो यसअघि पनि सुनिदै आइएको हो । मिस नेपाल वल्र्ड नै गर्ने यस्ता गुनासोहरु अरु विधाका विजेताले नगर्ने कुरा भएन । राज्यको सहयोग नपाएको गुनासो त झन् सबै प्रतिस्पर्धीले गर्दै पनि आएका छन् ।
यसरी हेर्दा मिस नेपालको आयोजक पनि सन्तुष्ट देखिएको छैन । पर्याप्त श्रोत र साधन नुहुन र पैसाको अभाव हुनु आफूहरुका लागि ठूलो चुनौती पनि मिस नेपालको आयोजकको छ ।
नेपालमा अहिले सौन्दर्य प्रतियोगीताको भेल नै लागेको छ । यस्तो अवस्थामा मिस नेपालको चर्चा पहिलेको भन्दा अहिले झनै घटेको हो । श्रृङ्खलाले त्यो घट्दै गरेको चर्चालाई केही हदसम्म माथि ल्याएकी भने हुन् ।
मिस नेपालको आयोजक संस्था द हिडेन ट्रेजरले मिस नेपाल आयोजना सकिएपछि विजेता प्रतिस्पर्धीलाई त्यो खालको प्रचार नै नगरेको देखिएको छ । सधै मिडिया र राज्यको मात्र साथ खोजेर पनि हुँदैन । मिडियाले पर्याप्त सहयोग नगरेको पनि होइन होला । तर, प्रतिस्पर्धी र आयोजकले आफूलाई ब्रान्डिङ गर्नका लागि विशेष सोच पनि बनाउन आवश्यक छैन र ?
मिस नेपाल आयोजना भएको दिनमै प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने मिडिया बाहेक अन्यसँग कुराकानी नै गर्न नदिने शैली अझै पनि छ । मिस नेपाल आयोजना पश्चात विजेतासँग मिडियाको दुरी नजिक ल्याउने काम आयोजकले गर्न सकेको छैन ।
यसैले पनि मिडियासँग र दर्शकसँग कनेक्शनमा हुने काम उनीहरुले पनि गर्न आवश्यक छैन र ?
आफूले आफूलाई ब्रान्डिङ गर्न नखोज्ने अनी मिडियाले साथ दिएन भनेर सधै कराउनुको अर्थ पनि के होला र ? आयोजकले कार्यक्रम गरेपछि विश्वका विभिन्न देशमा हुने व्यूटी प्याजेन्टमा पठाउनु मात्र ठूलो कुरा हो भनेर सोच्नु हुँदैन । नेपालमै मिडियासँगको निरन्तर संवादमा पनि ल्याउन आवश्यक छ । यस बिषयमा पनि आयोजक र टाइटल विजेताले सोचौ न ।
‘प्रेम संसार’को शुभ मुर्हत सम्पन्न
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- नेपालले मिस वल्र्डमा ठूलो फड्को मार्न सकेको छैन । विगत केहि बर्षदेखि मिस वल्र्डमा नेपालको सहभागीता निरन्तर रहेपनि फड्को मार्न भने नेपाल असक्षम छ । मिस वल्र्डमा जानु अघि सहभागीहरुले नेपाललाई जिताउने र […]